Ithegi: cmp | Martech Zone
Yandisa Iinzame zakho zeNtengiso zika-2022 ngoLawulo lweMvume
NgoMvulo, nge-10 kaJanuwari, 2022 NgoMvulo, nge-10 kaJanuwari, 2022 UEric Tejeda
Unyaka ka-2021 ubungalindelekanga nje ngo-2020, njengoko uninzi lwemiba emitsha icela umngeni kubathengisi. Abathengisi kuya kufuneka bahlale bekhulile kwaye besabela kwimingeni emidala kunye nemitsha ngelixa bezama ukwenza okungakumbi ngokuncinci. I-COVID-19 itshintshe ngokungenakuguquleka indlela abantu abafumanisa ngayo kwaye bethenga - ngoku yongeza amandla okudibanisa okwahluka kwe-Omicron, ukuphazamiseka kwekhonkco lokubonelela kunye nokuguquguquka kweemvakalelo zabathengi kwipuzzle esele inzima. Abathengisi abajonge ukubamba imfuno ye-pent-up ba
Indlela abapapashi abangayilungiselela ngayo iTekhnoloji yeTekhnoloji yokufikelela kubaphulaphuli abaSanda ngokwanda
Lwesine, Disemba 10, 2020 Lwesine, Disemba 10, 2020 Elena Podshuveit
I-2021 iyakwenza okanye iphule abapapashi. Unyaka ozayo uyakuphindaphinda uxinzelelo kubanini beendaba, kwaye ngabona badlali banobuchule abaza kuhlala bethe nca. Intengiso yedijithali njengoko sisazi ukuba iza kuphela. Sifudukela kwindawo yentengiso eqhekeke ngakumbi, kwaye abapapashi kufuneka baphinde bacinge ngendawo yabo kule ecosystem. Abapapashi baya kujongana nemiceli mngeni ebalulekileyo ekusebenzeni, isazisi somsebenzisi, kunye nokukhuselwa kwedatha yobuqu. Ukuze ndi
ICeltra: Ngokuzenzekelayo iNkqubo yokuYila kweNtengiso
NgoMgqibelo, Matshi 21, 2020 NgoLwesihlanu, Matshi 20, 2020 Douglas Karr
Ngokwe-Forrester Consulting, egameni leCeltra, iipesenti ezingama-70 zabathengisi zichitha ixesha elininzi besenza umxholo wentengiso yedijithali kunokuba bekhetha. Kodwa abaphenduli baqaphele ukuba imveliso yoyilo oluzenzekelayo iya kuba nefuthe elikhulu kule minyaka mihlanu izayo kuyilo loyilo lwentengiso, olunefuthe elikhulu: Umthamo wamaphulo wentengiso (84%) Ukuphucula inkqubo / ukusebenza ngokuhamba komsebenzi (83%) Ukuphucula ukufaneleka kobuchule ( 82%) Ukuphucula umgangatho wobuchule (79%) Yintoni iPlatform yoLawulo lokuYila? Iqonga lolawulo loyilo
Ukuhamba kweBannerflow: Uyilo, iSikali, kunye nokuPapasha amaphulo
NgoLwesine, uJuni 21, 2018 NgoLwesine, uJuni 21, 2018 Douglas Karr
Njengoko iintengiso zentengiso ziya zisihluka ngakumbi, ukukwazi ukwakha, ukusebenzisana, kunye nokufumana izibhengezo zentengiso ezivunyiweyo kunokuba yinto embi. Iiplatifomu zoLawulo lokuyila (CMP) zibonelela ngesakhono sokuhlengahlengisa uyilo, ukuphucula ukuhamba komsebenzi, kunye nokwandisa konke ukuyila kwimigangatho yemizi-mveliso. Iqonga lolawulo lokuyila lweBannerflow likunika ulawulo olupheleleyo kwimveliso yentengiso kunye nokusasazwa, ukugcina ixesha nemali. Ukuba usebenza kumajelo amaninzi, kwiimarike ezininzi, kunye neefomathi ezininzi, iBannerflow inyusa ubunzima, iyenza isebenze
Thursday, June 21, 2018 Thursday, June 21, 2018